Ingabe ikhofi iphakamisa ushukela wegazi > Ukudla ngesifo sikashukela
Ukusetshenziswa kwekhofi kuthinta kanjani ushukela wegazi
I-Cortisol yi-hormone ekhiqizwa yizindlala. Kwenyusa umfutho wegazi, ushukela wegazi futhi kuguqula umzimba kuhulumeni wezenzo ezisebenzayo.
Ikhofi, noma kunalokho icaffeine, imvamisa ikhulisa okwesikhashana amazinga e-cortisol. Kodwa-ke, lokhu kuncike ezicini eziningana, kufaka phakathi lapho uphuza ikhofi, ukuthi uphuza kangaki, nokuthi ungakanani umfutho wegazi.
ICortisol, njengomthetho, iyanda ekuseni, ngakho-ke uma uphuza ikhofi ngo-6 ekuseni noma ngehora le-10, ngeke uzilimaze, ngoba i-cortisol ngokwemvelo ikhuphuka ngalesi sikhathi sosuku kunoma yisiphi isimo.
Kepha umzimba wakho ngeke ukwazi ukuzimela eziguquguqukayo ngokuzimela izinga le-cortisol uma uphuza ikhofi eliningi ntambama noma kusihlwa, lapho izinga lakhona livame ukuwa. Ngakho-ke, kungcono ukuphuza itiye noma okuthile okubunjiweyo ntambama.
Ngabe ikhofi yohlobo lwesifo sikashukela 2 kungenzeka?
Umzimba kufanele ukhiqize i-insulin ukuze ucubungula ushukela. Futhi ngenkathi ikhofi ingaba wusizo ekuvimbeleni isifo sikashukela, ingaba yingozi kwabanesifo sikashukela.
I-decaffeinated coffee ingaba nezinzuzo ezithile zeziguli ezinesifo sikashukela. I-Chlorogenic acid namanye ama-antioxidants ekhofi angaba nomphumela omuhle wezempilo, ikakhulukazi ngokuvimbela ukwanda kwamazinga we-glucose ne-cholesterol.
Abantu abangafuni ukuyeka ikhofi bangaya kwikhofi ebunjiwe isonto elilodwa noma amabili ukubona ukuthi kusithinta kanjani ushukela.
Uma izinga layo liyancipha, ikofi elingashisiwe lingakwazi futhi ukudakwa, kepha kuyodingeka uyilahle eyejwayelekile.
I-Cream noshukela kufakwe ekhofi yengeza ama-carbohydrate nama-kilojoule kuwo. Imiphumela yoshukela namafutha kukofi osheshayo naphansi ingadlula izinzuzo zeminye imiphumela evikela isiphuzo.
Ukuphuza ikhofi kungaba yindlela yokuvimbela ushukela, kepha akuqinisekisi umphumela ongu-100%. Ucwaningo oluhlukahlukene luveze ukuthi ikhofi ingathinta kabi abantu asebevele benesifo sikashukela.
Kungakuhle ukuba bashintshe kancane kancane baye ekhofini elibolile ukuze bagweme izinkomba ezinjengokuthi "ukuhoxa" njengobuhlungu bekhanda, ukukhathala, ukuntuleka kwamandla nokunciphisa umfutho wegazi.
Izikhungo emhlabeni jikelele zicwaninga ukuthi ikhofi ilithinta kanjani isifo sikashukela. Babandakanya amavolontiya, iziguli kanti cha, kwenziwa ukuhlolwa okuhlukahlukene. Ngokuvamile, imiphumela yokuhlolwa ixubekile, kepha izinkomba ezijwayelekile zingabonakala.
Abantu abaphuza izinkomishi zekhofi ezi-4-6 nsuku zonke cishe cishe ingxenye yokuthola isifo sikashukela sohlobo 2. Inkomishi ngayinye inciphisa amathuba okugula yi-7%, yize ingakufanele ukuthwalwa ngenani elikhulu kakhulu, ngoba lokhu kuzothinta umzimba wonke.
Kuyamangaza ukuthi abesifazane abaphuza njalo iziphuzo ezinekhofi banamathuba amancane okugula kunamadoda.
Ososayensi bathole ukuthi akuyona i-caffeine engaka njengoba inhlanganisela yayo ne-chlorogenic acid, okuyi-antioxidant yemvelo, futhi isiza ukulawula amazinga e-hormone. Ngaphezu kwalokho, ikhofi inomthelela ekwehlukanisweni okusebenzayo kwamafutha, okubalulekile ukulawula amazinga esisindo, ikakhulukazi ngesifo sikashukela sohlobo 2.
Uma ungakaze uphuze ikhofi ngaphambili, kufanele ungaqali, kodwa uma uphuza ingakusiza.
Ukulimala kwekhofi kushukela
Kwenzeka ukuthi i-caffeine ibe nomthelela ongemuhle ushukela usuka egazini ungene ezithweni zangaphakathi. Kugcinwa ku-plasma, bese kunciphisa ukumuncwa kwe-glucose, kuxhume nemikhumbi. Kulabo abaphoqelelwa ukuba baqaphe ngokuqinile amazinga kashukela, leli themba alimnandi kakhulu, ngoba ngaso sonke isikhathi akwenzeki ukulungisa isimo ngokushesha.
Izinzuzo zekhofi lesifo sikashukela
Ngakolunye uhlangothi, ezigulini eziningi, ikhofi, ngenxa yomphumela wayo wokumba, yehlisa ukuvuvukala kwezicubu futhi kunomthelela omuhle ekuthuthweni kweglue glucose. Izitsha ziba sengozini enkulu ye-insulin, futhi ungasinqanda ngokushesha lesi sifo futhi kalula.
Ososayensi baseMelika phakathi neminyaka engu-15 babonile isimo sabantu abangama-180. Isifo sikashukela sohlobo II sasingama-90, isigamu saso siphuza izinkomishi zekhofi ezi-2,5 nsuku zonke.
Isifo sikashukela, njalo, ukuphuza ikhofi, sasinezinga le-glucose eliphansi ngo-5%, ne-uric acid ngo-10%, uma siqhathanisa nalabo abangazange baphuze iziphuzo zekhofi futhi bengaguli,
Eqenjini labanesifo sikashukela, labo ababedla i-caffeine babene-glucose izinga le-18% ne-uric acid engu-16% ephansi kunoshukela ababengaphuzi ikhofi.
Akunakuba nempendulo eyodwa ecacile. Kukhulu kakhulu kuncike esigulini esithile, esigabeni kanye nasezimpawu zesifo, ukuba khona kwezinye izifo ezihlangene (futhi akujwayelekile kuma-diabetes). Udinga ukubheka umphumela we-caffeine emzimbeni wakho ngokulinganisa ushukela wakho wegazi nge-glucometer.
Zama inkomishi encane yekhofi eyonakele, ulinganise ushukela, uphinde uhlole isimo sakho. Manje phuza ikhofi ejwayelekile, wenze okufanayo. Uma izinga likashukela wegazi lingaguquki kakhulu, ungaphuza ikhofi, kodwa kubalulekile ukuqonda ukuthi yiliphi futhi ungangezi izengezo eziyingozi kushukela kulo.
Ngokuyinhloko, cishe wonke umuntu angaphuza ikhofi, kodwa kungadingeka ukuthi uzame izinhlobo ezahlukene kanye nezindlela zokupheka ezingeke zilithinte kakhulu izinga le-insulin egazini.
Ikhofi eluhlaza ingenye yezinketho ezinhle kakhulu, ivunyelwe cishe wonke umuntu. Ine-chlorogenic acid ethe xaxa, esiza ukulawula isisindo futhi ngasikhathi sinomphumela omuhle emithanjeni yegazi, yandisa izinga lokuzwela kwe-insulin.
Ikhofi yemvelo nayo ingaba wusizo, futhi awukwazi ukuyenqaba, ikakhulukazi uma inomphumela omuhle enhlalakahleni. Kukhona ne-chlorogenic acid ne-caffeine lapho, ngakho-ke umphumela omuhle nawo uyabonakala lapho.
Ikhofi esheshayo, kanye nekhofi elivela emishinini yokuthengisa abathengiswayo iyaphikiswa, ngoba imvamisa inezithasiselo ezingeziwe ezandisa ushukela wegazi. Akunanzuzo kuzo, kodwa kuyinto enengqondo ukulimaza umzimba. Iziphuzo ezinjalo kufanele zilahlwe ngokuphelele.
Odokotela, bebonke, banokuhle ngokungeza ubisi endebeni, mhlawumbe kungathi shu. Ubisi lwesifo sikashukela luhle. Kodwa akufanele ungeze ukhilimu, ngoba bona (ngisho ne-nonfat) bakhulisa kakhulu okuqukethwe kwekhalori futhi bakhuphule amazinga kashukela egazi. Ungase uthande isiphuzo sekhofi ngo-ukhilimu omuncu onamafutha aphansi (kuzwakala kuyinqaba, kepha kwabanye abanesifo sikashukela yindlela enhle yokuphuma futhi ungajwayela).
Ungangeza ushukela ekhofi, kungcono ukushintshela kuma-sweeteners okwenziwe njengama-aspartame nama-analogues. Omunye ufaka i-fructose, kepha isebenza ngendlela ehlukile kuwo wonke umuntu, ngakho-ke kufanele uqaphele.
Ikhofi ibhekwa njengesiphuzo esithole ukuthandwa endulo nokunambitheka kwayo okungavamile. Kuletha izinzuzo ezikhethekile kubantu abathambekele ezifweni zenhliziyo.
Ngenxa ye-linoleic acid, eyingxenye yobhontshisi wekhofi, kungenzeka ukuvikela imivimbo, ukushaya kwenhliziyo nezinye izifo eziningi. Namuhla, lo mbuzo olandelayo ubaluleke kakhulu: kungenzeka yini ukuphuza ikhofi onesifo sikashukela?
Iningi lochwepheshe likholelwa ukuthi lesi siphuzo sisiza umzimba wesiguli esiguliswa yile ndlela yokwenza izinto nge-insulin. Ngokusho kwezifundo zesayensi, ubhontshisi wekhofi unciphisa kakhulu ukukhula kwezinqubo zokuvuvukala emzimbeni.
Uma umuntu kufanele enze ukuhlinzwa okukhulu noma ukwelashwa kabusha, khona-ke lesi siphuzo esithile singasiza ekuqedeni imiphumela yesifo.
Ngakho-ke, kukholelwa ukuthi inezici ezithile zokwelapha.
Indima yesiphuzo kushukela
Ikhofi iyisiphuzo esimnandi esinephunga eliyingqayizivele nokunambitheka. Kungaba bobunye ubuthakathaka bomuntu obungenakuphikwa, ikakhulukazi ekuseni.
Inkinga yonke ukuthi akubona bonke abantu abanempilo enhle kakhulu ukuze bazivumele ukuba babe ngabathandi bekhofi, ngoba, njengoba sazi, ukusetshenziswa kwalesi siphuzo kuyakwazi ukuzenzela izinguquko ezinqubweni zomzimba.
Inkinga yesifo sikashukela. Awukho umbono oqondile futhi ongathandeki odokotela ngokusetshenziswa kwekhofi ngabashukela. Noma ngubani onesifo sikashukela ufuna ukwazi ngokuqinisekile - kuvunyelwe yini ukuba nalo mkhuba ngaphandle kokuba nemiphumela engemihle ngokwakhe?
Ingabe ikhofi elinyibilikisiwe livunyelwe abanesifo sikashukela?
Ekhiqizweni kwekhofi esheshayo, kusetshenziswa indlela yamakhemikhali. Njengomphumela, kulahleka cishe kwazo zonke izinto eziwusizo, kuhogela iphunga nokunambitheka okungafani nenye. Ukuqinisekisa ukuthi iphunga lisekhona, abakhiqizi baphendukela ekuthuthukisweni kwalo ngokunambitheka.
Ochwepheshe baluleka ukuthi bayeke ngokuphelele ukusetshenziswa kwayo, ngoba bakholelwa ukuthi umuntu kungenzeka atholwe ukulimala kunokuba azuze.
Kungenzeka yini ukuthi usebenzise ikhofi yemvelo kwabanesifo sikashukela?
Eminye imikhiqizo ilungele ukwehlisa ushukela wegazi, kanti eminye iyayandisa. Kulokhu, abanesifo sikashukela bavame ukuzibuza ukuthi yikuphi ukudla okunciphisa ushukela wegazi ngokushesha nokuthi bangalusebenzisa kanjani ngendlela efanele ukuze lusebenze kahle.
Konke ukudla okwehlisa ushukela kungahlukaniswa ngamaqembu amaningana.
Lapho uphendula umbuzo wokuthi yikuphi ukudla okunciphisa amazinga kashukela egazini, kubalulekile ukuqonda umgomo wesinyathelo sokudla kokuqukethwe ushukela wegazi okwifomu 2 sikashukela. Konke ukudla kuqukethe ama-carbohydrate (ngamanani amakhulu noma amancane).
Bona, lapho sebedakwe, bacutshungulwa ku-glucose, bese idonswa egazini futhi kufanele idluliselwe kumaseli asebenzisa i-insulin. Esikhathini sikashukela, lokhu akwenzeki ngenxa yokuntuleka kwe-insulin.
Ngenxa yalokho, iqongelela emzimbeni futhi inyusa ushukela.
Ngakho-ke, impendulo yombuzo wokuthi yikuphi ukudla okushukela okuphansi okuxutshwe kuxutshwe. Eqinisweni, azikho.
Kukhona amakhambi okwelapha anciphisa ushukela wegazi, kodwa imikhiqizo esiza ukunciphisa ushukela ayikatholakali. Ukuze umkhiqizo ungathinti okuqukethwe ushukela, akufanele ube nama-carbohydrate nhlobo, futhi izitsha ezinjalo azikho.
Kepha kukhona lezo eziqukethe ama-carbohydrate ambalwa kakhulu kangangokuba azikwazi ukuthinta okuqukethwe ushukela emzimbeni. Kodwa azinazo izindawo zokunciphisa ushukela.
I-diabetesic ngayinye ijwayele inkomba efana ne-glycemic index. Kuyakhombisa ukuthi ukusetshenziswa kokudla kuthinta kangakanani ushukela egazini.
Lesi sikhombisi sehlise, ama-carbohydrate amancane ekudleni, futhi nethonya elincane elinalo enkambweni yesifo sikashukela. Le nkomba iyinkomba eyisisekelo ekwakhekeni kokudla.
Inkomba ephezulu inoluju, ushukela. Ama-indices aphansi afaka lezo zinkomba ezisukela kumayunithi angama-30 kuye kwangama-40 (ngokwesibonelo, amantongomane angama-20).
Kwezinye izithelo ezimnandi, le nombolo iphakathi kwamayunithi angama-55 - 65. Le yinkomba ephezulu futhi akufanelekile ukudla izitsha ezinjalo zalabo abanesifo sikashukela sohlobo 2.
Enye into eyondlayo kashukela ukuthi uhlobo 2 lwesifo sikashukela kuphela esidinga ukudliwa ngokucophelela. Ngefomu lokuqala lenkambo yesifo, asikho isidingo sokunciphisa umkhawulo ekukhetheni izitsha. Ukusetshenziswa kwanoma yikuphi, ngisho ne-carb ephezulu, ukudla kungasuswa ngomjovo we-insulin.
Umsoco we-Insulin ephezulu
Yilokhu "uhlelo lokuqina" olusibekele thina uNatalia Afanasyeva.
Ukugcizelelwa okuyinhloko kungukuzivocavoca kwe-aerobic yamandla aphakathi: ngokushaya ngamandla okungu-120-140 ukushaywa ngomzuzu, okuhlala okungenani isigamu sehora, kepha kungabi ngaphezu kwemizuzu engama-60. Ngale njongo, ukubhukuda noma, ngokwesibonelo, amakilasi emishini yemithambo yegazi ahamba phambili. Futhi ngakho - amahlandla amathathu kuya kwesihlanu ngesonto.
Ukuqeqeshwa kwamandla kuyenzeka futhi: futhi ngokuqina okuphakathi, okuhlala imizuzu engama-30-60, kodwa kufanelekile ukukwenza ngaphansi kokuqondisa komqeqeshi onekhono, kabili kuya kathathu ngesonto. Kodwa-ke, ngokweqiniso, kungaba kuhle ukukhipha amandla nge-Pilates noma i-yoga. Basiza ukuqonda umzimba wakho kangcono futhi bafunda ukuwuphatha, futhi bakwazi nokuphefumula ngokuzolile okuhlale kusebenza. Ezinye izindlela ezimbili ezinhle zokubamba umdanso nokuqeqeshwa kokusebenza.
Uma uhlanganisa amandla nokuqeqeshwa kwe-Cardio ngosuku olulodwa, isikhathi esiphelele seseshini akufanele sidlule imizuzu engama-90.
Ngemuva kweseshini ngayinye yokuqeqeshwa, kubalulekile ukwenza imisebenzi yokwelula - chitha imizuzu eyi-10-15 kuwo wonke amaqembu amakhulu emisipha kanye nama-ligaments.
Abantu abanesifo sikashukela sohlobo II, ngemuva kokuphuza inkomishi yekhofi ngaphambi kokudla, phawula ukwanda koshukela wegazi. Ngesikhathi esifanayo, ukumelana kwe-insulin okwandayo kuyaphawulwa. Futhi lokhu kusho ukuthi amaseli omzimba ayayeka ukubona isenzo se-insulin neglucose iqala ukuqwabelana egazini.
Ukwanda okuhleliwe kushukela wegazi kuholela ekuphazamisweni kwe-metabolic futhi kubangele ukulimala okukhulu emzimbeni. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa njalo kwekofi kuholela ekuphazanyisweni kokulala, okubuye kuholele ekukhuliseni i-insulin.
Izinga eliphakeme le-insulin liholela ku-:
ukugcinwa kwamanzi emzimbeni
ushintsho ekwakhekeni kwe protein.
Ikhofi inyusa ushukela wegazi
Hawu ... Ngakho-ke kwehlisa noma kukhulisa? Konke kunabafana, indida phakathi kwemiphumela yesikhashana neyesikhathi eside yokuphuza ikhofi.
Izifundo zesikhashana esifushane zihlobanisa ngokuzethemba ukusetshenziswa kwekofi noshukela wegazi okhuphukile kanye nokwanda kwe-insulin. Ucwaningo lwakamuva luveze ukuthi ukukholwa kwekhofi emnyama equkethe i-100 mg ye-caffeine kungakhuphula kakhulu ushukela wegazi kumuntu ophilile, kepha omkhulu ngokweqile.
Olunye ucwaningo lwesikhashana luthole ukuthi, kubantu abaphilile futhi nakubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2, ukuphuza ikhofi kuholela esimweni esibi sokushukela kwegazi kanye nokwehla kokuzwela kwe-insulin (ukumelana ne-insulin) ngemuva kokudla.
Isiphetho: Izifundo zesikhashana esifushane zibonisa ukuthi ukuphuza ikhofi (i-caffeine) kungaholela ekwenyukeni koshukela wegazi kanye nokwehla kokuzwela kwe-insulin (ukumelana).
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi "kubantu abaphilile ngokuphelele, abantu abakhuluphele ngokweqile noma abanesifo sikashukela sohlobo 2 lapho besebenzisa i-caffeine futhi ngokushesha emva kwalokho - ukudla okuqukethe i-carbohydrate isikhathi eside, cishe amahora ayi-6, umzimba uthambekele ekutholeni i-insulin," USolwazi - Umondli wezempilo eYunivesithi yaseGuellpa uTerry Graham.
Iminyaka eminingi, abantu ababandakanyeka ekuqineni nasebusweni bebekhathazekile ukuthi ikhofi ipha amanzi emizimbeni yabo. Kodwa-ke, ukubukeza kwakamuva kwezifundo eziyi-10 kukhombisile ukuthi ukuphuza kufika ku-550 mg we-caffeine ngosuku (noma izinkomishi ezinhlanu) akubanga ukungalingani kwe-electrolyte fluid kubasubathi noma kwabathanda ukuzivocavoca ngokweqile.
Kokunye ukubuyekeza, abacwaningi baphethe ukuthi ukuphuza iziphuzo ezinekhofi njengengxenye yendlela ejwayelekile yokuphila akuholeli ekulahlekelweni uketshezi okudlula inani lamanzi asetshenzisiwe, futhi akuhlotshaniswa ne-hydration hampe.
Ungaphuzi ikhofi kuphela njengesiphuzo esomile, futhi uphuze namanzi anele futhi uzobe ulungile.
Kuthiwani ngekhofi eyonakele?
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuphuza ikhofi ene-desaffeine kunezinzuzo ezifanayo zezempilo njengokuphuza ikofi lekhofi. Lokhu kusebenza futhi ekunciphiseni ubungozi bokuthola isifo sikashukela sohlobo 2. Ngokusobala, ososayensi baphetha ngokuthi yi-caffeine, hhayi ezinye izinto ezihlanganisiwe, ezingaba nomphumela wemiphumela yesikhashana yokwandisa ushukela wegazi lapho uphuza ikhofi.
Isiphetho: Ikhofi eyonakele ayibangeli ukwanda okufanayo koshukela wegazi kanye nekhofi ekhishwe yi-caffeine, okungaba inketho enhle kubantu abanezinkinga ushukela.
Masibe qotho: ikhofi ingasiguqula sisuke esilwaneni silele isazi sefilosofi (noma okungenani masivuke). Ikhofi, nokuqukethwe kwakho kwe-caffeine, ikakhulukazi kunikeza idatha engcono kakhulu engokwengqondo nangokomzimba.
I-Caffeine yehlisa ijubane lethu lokubona umthwalo, okungukuthi, ikhulisa ukugxila futhi ingeza amandla, siyasebenza futhi asizizwa sisebenza kanzima kangakanani. Abantu abaphuza ikhofi njalo basebenza kangcono, ukuhlolwa kukhombisa izinkomba ezingcono kakhulu zesikhathi sokuphendula, inkumbulo yomlomo nokucabanga kwe-visuospatial.
Olunye ucwaningo luveze ukuthi abesifazane abaneminyaka yobudala engama-80 benza izivivinyo ezingcono kakhulu zomsebenzi wokuqonda kwengqondo uma behlala bephuza ikhofi impilo yabo yonke.
Isiphetho: ikofi / i-caffeine encane ngaphambi kokwenza imisebenzi ebalulekile edinga ukuqapheliswa namandla kuzokwenza umsebenzi ujabule.
Ingabe ikhofi iphakamisa ushukela wegazi
Kubantu abanesifo sikashukela, umbuzo wokuqala ngowokuthi yini ongayidla futhi uyiphuze. Futhi ngokushesha amehlo akhe awela esiphuzweni esinamandla - ikhofi.
Isifo sikashukela kumele sazi! Ushukela yinto ejwayelekile kuwo wonke umuntu. Kwanele ukuthatha amaphilisi amabili nsuku zonke ngaphambi kokudla ... Imininingwane eminingi >>
Empeleni, umbuzo othi "ingabe ikhofi inyusa ushukela wegazi" iyimpikiswano impela, nemibono ihluke kakhulu: abanye ochwepheshe bakholelwa ukuthi i-caffeine ivimba indlela yeglucose egazini iye kwizicubu zomzimba womuntu, futhi othile uthi ikhofi isiza nokubuyisela ushukela kuye igazi.
Eqinisweni, ubhontshisi wekhofi neziphuzo kuqukethe izinto nezakhi ezandisa umfutho wegazi ngokwandisa ithoni yodonga lwe-vascular kanye nokusheshisa ukwakheka kwemisipha yenhliziyo. Lapho uphuza isiphuzo sekhofi, i-adrenaline ekhiqizwa yi-adrenaline inyusa i-adrenaline futhi iphazamisa nomsebenzi we-insulin.
Kukhona ukuhlolwa okufakazela ukuthi ikhofi iyanda futhi igcina ukumelana, isb. Ukumelana ne-insulin emangqamuzaneni omzimba, okuphumela kumanani andayo weglue plasma. Ngakho-ke yebo, ikhofi inyusa ushukela wegazi, okuwumphumela ongathandeki kwabanesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, igcina amanzi emzimbeni futhi iholele ekwakhekeni kwe-edema.
Ngokwezinzuzo zekhofi ne-coffee, umuntu angahlukanisa ithoni ekhulayo, umuzwa wokuqina kanye nokwanda kokusebenza. Ukwanda kwephimbo lohlelo lwezinzwa kuthinta kahle ukuqashelwa, inkumbulo nesimo semizwa yomuntu. Ngaphezu kwalokho, izinhlobo zekhofi eziluhlaza ziqukethe inani elikhulu lama-antioxidants avimbela ukuguga ngaphambi kwesikhathi kwamaseli womzimba ahlotshaniswa ne-lipid peroxidation. Indawo yekofi ye-antioxidant ikuvumela ukuthi uqinise udonga lwe-vascular, oluyisixhumanisi esibuthakathaka kwishukela.
Iziphi iziphuzo okufanele ngizenqabe?
Kepha hhayi i-caffeine kuphela eyingxenye yekhofi. Uma kungumkhiqizo obumbekile noma ongaphansi. Esiphuzweni esisheshayo kunezengezo eziningi eziningi ezivame ukuba nomthelela ongemuhle kwabanesifo sikashukela. U-ayisikhilimu nobisi, ushukela kanye nesiraphu - yonke le mikhiqizo ehambisana neziphuzo zekhofi ezweni lethu ayifiseleki kakhulu kubantu abanoshukela wegazi ophezulu. Futhi ukwakheka kweziphuzo zekhofi ezenziwe ngomumo ezifakwe ngaphakathi kufaka ushukela omkhulu futhi lokhu kulimaza umzimba ngokuphelele.
Naphezu komqondo wokuphuza ikhofi onesifo sikashukela, kusekhona umbono wabantu abaningi. Uma ubheka umbono wochwepheshe, odokotela bazokutshela ngamabomu ukuthi kungcono ukwenqaba isiphuzo esinjalo kanye. Kusukela ukungabikho kwayo ekudleni kwakho, ngokuqinisekile ngeke ulahlekelwe yilutho ngokuya ngamaminerali awusizo futhi anempilo namavithamini. Ngokwenqaba ikofi, uzogwema izinkinga eziningi zesifo sikashukela futhi wehlise nesidingo somuthi. Kodwa-ke, akukho ukuvimbela okucacisiwe kwekhofi kusuka kochwepheshe, futhi kuhlale kwenzeka ukuthola indlela yokuphuma.
Okokuqala, udinga ukusebenzisa kuphela okusanhlamvu okungokwemvelo komhlaba, njengoba ezimbizeni zekhofi esheshayo kunezinto eziningi ezengeziwe eziqukethe amakhalori ngokweqile nama-carbohydrate. Okwesibili, phuza ikhofi esibuthakathaka noma uyihlinzise ngobisi lwe-skim noma lwesoya.
Kuyaluleka ukuthi usebenzise iziphuzo zekhofi ezenziwe ezinhlotsheni eziluhlaza zekhofi - bezingavuthiwe futhi zigcinwe iningi lempahla yazo enenzuzo.
Izithako ezingaphekiwe i-caffeine zingasetshenziswa. Ngokwesisindo esomile, ingxenye ye-caffeine incishiswa kakhulu, evimbela ubunzima obungenhla. Ungasebenzisa futhi izikhala zekhofi, ezifana ne-articoke yase-Jerusalem, ama-chestnut, i-rye, i-chicory. Lezi zinto zinomphumela we-hypoglycemic.
Uma uthatha isinqumo sokuphuza isiphuzo esihlaselayo ngesifo esinzima kangaka se-endocrine, khona-ke sebenzisa amathiphu ambalwa awusizo.
Phuza ikhofi yemvelo futhi uvikele ukudla okusheshayo.
Ungakhohlwa ukubheka njalo ushukela nge-glucometer, ukulandela ukudla, ukuqapha isisindo sakho futhi ungabi namahloni kude nokuzivocavoca umzimba.
Phuza iziphuzo ngaphandle kwezengezo ezingeziwe, njengo-ayisikhilimu osindayo, ushukela noma isiraphu.
Uma izibalo zakho zoshukela ziphezulu manje, kungcono ukunikela inkomishi yekofi okwesikhashana. Kuyadingeka ukuqinisa isimo somzimba wakho kanye nokubuyisa amazinga kashukela aphezulu kunejwayelekile.
Lapho kungathandeki ukusetshenziswa
Yiziphi izifo nemibandela ezinconywayo ukuthi uyeke ukuphuza ikhofi neziphuzo zekhofi?
Insomnia I-Caffeine icutshungulwa isikhathi eside emzimbeni, ngakho-ke akufanele uyiphuze kusihlwa noma ebusuku.
Umlando wokuhlaselwa yinhliziyo noma i-acute cerebrovascular ngengozi.
Ngezifo ezingenhla, kuhlanganiswa nesifo sikashukela, andisa ingozi ye-hyperglycemia engafuneki lapho ephuza iziphuzo zekhofi, ngakho-ke uqondiswe yilwazi bese ufinyelela iziphetho ezifanele.
Ungayenza kanjani ikofi kwabanesifo sikashukela?
Kuhlaka lwesifo sikashukela sohlobo lokuqala nesesibili, ukulungiswa kwesiphuzo kufanele kwenziwe ngokwemithetho ethile. Ikakhulu, ukusetshenziswa koshukela akwamukeleki ngenxa yamathuba okukhuphuka okubukhali kwe-glucose. Izikhundla ezihlukile zingasetshenziswa njengezindawo zazo, ngokwesibonelo, i-saccharin, i-sodium cyclamate, i-aspartame, noma ingxube yalokho.
I-caffeine ephezulu ayifiseleki kakhulu. Okufanayo kusebenza kuzo zonke ezinye iziphuzo zekhofi, ngoba kungavusa ukuqina kokusebenza kwenhliziyo, gxuma kumfutho wegazi.
Ikhofi yohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2 akufanele ifake ukhilimu, ngoba ivezwa ngamaphesenti aphezulu wokuqukethwe kwamafutha.
Ngenxa yalokhu, lokhu kungaba nomthelela kushukela wegazi futhi kube ngumthombo wokwakhiwa kwe-cholesterol. Ukukhuluma ngemithetho nemigomo yokwenza ikofi kwabanesifo sikashukela, unake iqiniso lokuthi:
Kuvunyelwe ukusetshenziswa kobisi, okufanele lungezwe kuphela ngendlela yokushisa. Kukulesi simo lapho lapho esingakhuluma khona ngokulondolozwa kwazo zonke izakhi namavithamini azuzisayo,
inani elincane lekhilimu omuncu elinamaphesenti amancane okuqukethwe kwamafutha lingasetshenziswa. Kodwa-ke, kulokhu, isiphuzo sekofi sizothola ukunambitheka okuthile, okungewona wonke umuntu othanda,
kuvunyelwe ukusebenzisa izinhlobo zokuphuza ezinomswakama, kanye nangaphansi. Olunye uhlobo lokubumbeka olungasuswa yisifo sikashukela ikofi eluhlaza.
Ngakho-ke, ikofi nesifo sikashukela kungaphezu kwenhlanganisela eyamukelekayo. Ukuthola ukuthi usebenzisa noma yini ukusetshenziswa kwesimo esethuliwe, kunconywa kakhulu ukuthi ufunde mayelana nokwehlukahluka ngakunye.
Lapho ubhekene nesifo sikashukela, ungaphuza iziphuzo zekhofi ezisheshayo. Kodwa-ke, abanesifo sikashukela kufanele bakhumbule ukuthi ukwakheka okunjalo kulungiselelwe kuphela okusanhlamvu okungamakhwalithi amancane. Ngaphezu kwalokho, inani elikhulu lezinto ezengeziwe zengezwa emkhiqizweni onjalo: ukunambitheka kanye nokunye, okungekho okuwusizo esimweni se-pathological esiveziwe.
Ngokusekelwe kulokhu, ochwepheshe bancoma ngokuqinile ukuthi abanesifo sikashukela bakhethe izinhlobo ezibizayo zesiphuzo esinjalo. Kukulesi simo lapho onesifo sikashukela engaqiniseka ngekhwalithi yabo. Ikhofi yesifo sikashukela esisheshayo kufanele isetshenziswe esikhundleni soshukela, izengezo zobisi ezingenamafutha. Kunconywa ukwenza lokhu ngaphandle kwesisu esingenalutho noma ngaphambi kokulala.
Uma uchwepheshe evume ukusetshenziswa kwengqangi, khona-ke isikhathi esifanele sokusebenzisa kwayo sizoba isidlo sasemini. Kukulesi simo lapho ukugxuma kuma-indices kashukela kuzokhishwa, ukwakheka kwengcindezi ephezulu noma ephansi ngeke kwenzeke. Ukukhuluma ngekhofi elisheshayo, ngeke kwenzeke ukuthi unganaki ukusetshenziswa komkhiqizo womhlabathi, okubuye kube kude kakhulu nokuvunyelwa ngaso sonke isikhathi ukusetshenziswa kwe-diabetes.
Lo mkhiqizo wemvelo ungahle udliwe yisifo sikashukela. Ukuphuza ikhofi enesifo sikashukela sohlobo 2 kungahle kube ikakhulu ngenxa yokusebenza komkhiqizo ngokuncipha kwesisindo. Kuyiqiniso, isiphuzo akuyona i-panacea kulokhu, futhi ukuze kufinyelele umgomo owethulwe, onesifo sikashukela kufanele aphile impilo enempilo. Kodwa-ke, ikhofi ikuvumela ukuthi wenze lula futhi usheshise le nqubo.
Ngokunikezwe ukuthi ikhofi yemvelo ingathinta amazinga egazi kanye noshukela, kunconywa kakhulu ukuthi uxoxe ngezimpawu zokusebenzisa kwayo uchwepheshe. Endabeni yomfutho wegazi ophakeme, izinkinga ohlelweni lokugaya ukudla (ifomu elinamandla le-gastritis, izilonda zesisu), ukwakheka kuphambene.
Ngakho-ke ukuthi ikhofi lomhlabathi lingasetshenziswa ngumuntu onesifo sikashukela, kunconywa kakhulu ukuthi unake lezi zinto ezilandelayo zokulungiselela kwalo:
uvunyelwe ukusebenzisa ubisi olunokuqukethwe okunamafutha amancane, okuzodukisa futhi kunikeze isiphuzo esibekiwe,
noshukela wegazi ophakeme, akunakusho ukuthi kufanele ushukela ungezwe ekhofi. Noma kunjalo, kungcono ukwenza ngaphandle kokufakwa esikhundleni soshukela,
isiphuzo kufanele silungiselelwe kuphela. Kubaluleke kakhulu ukuthi kungashisi kakhulu noma kubanda.
Ikhofi nesifo sikashukela zingahambelana ngempela. Kungcono ukuhlanganisa ukusetshenziswa kwayo nobisi bese wenza isiphuzo esibuthakathaka. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukukhumbula ukuthi lokhu kuhlanganiswa akunasici kufanele kuphazamise ekudleni. Okusho ukuthi, uma umuntu onesifo sikashukela enezimpawu zokungasebenzi kahle kohlelo lokugaya ukudla, kunconywa ukuthi alahle ukusetshenziswa kwawo.
Isifo sikashukela singaphuza futhi siphuze izinhlobo ezithile zesiphuzo, okungukuthi ikhofi eluhlaza. Inzuzo yokwakheka ukuba khona kwe-chlorogenic acid, esiza ekuqedeni amafutha ngokweqile. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwalesi siphuzo kunomthelela omuhle emandleni omzimba wokuthola i-insulin. Ngakho-ke, ukushuba komzimba kuyanda, futhi umsebenzi wayo uthuthuka kakhulu.
Kodwa-ke, le khambi akuyona eyokwelapha, ngoba ikhofi eluhlaza iyisiphuzo nje esinezinto ezithile. Kulokhu, ngaphambi kokuyisebenzisa, kubaluleke kakhulu ukubonana nochwepheshe. Ngaphezu kwalokho, kuphoqelekile ukuthi uthintane nodokotela wesifo sikashukela kuphela, kodwa futhi nesazi se-gastroenterologist. Ngokunikezwa kwezakhiwo zesiphuzo, abanesifo sikashukela kuzodingeka baqiniseke ukuthi ukwakheka okunjalo kuvunyelwe ukusetshenziswa.
Umkhawulo kufanele ubhekwe njenge-pathologies ethile emsebenzini wezinso, isibindi, kanye nama-pancreas. Futhi i-contraindication kufanele ibhekwe njengethoni ekhuphukayo yemisipha ye-arterial, i-hypertension ekhulisiwe. Ngakho-ke, ngokuxilongwa okukwethuliwe, kunconywa ukuthi abanesifo sikashukela benqabe ikhofi eluhlaza ukuze umthamo othathwe ungavuseleli ukukhula kwezinkinga.
Ngakho-ke, thayipha isifo sikashukela esingu-2 isifo esidala ikhofi esamukeleka ngaphakathi. Ngasikhathi sinye, ukuze ungafaki ukwanda kwezinkomba zikashukela, ushintsho olubi ekudleni, kubaluleke kakhulu ukukhetha ngokucophelela inhlobo ethile yokwakheka. Kunconywe ngokuqinile ukuthi ukwakheka kulungiselelwe kahle. Kulokhu, abaphuza lezi ziphuzo ngeke babe nemibuzo yokuthi ikhofi iyalandisa yini ushukela wegazi, noma ngabe iyenyuka yini i-cholesterol.
Imfihlo kabhontshisi wekhofi
Iyini imfihlo yezinhlamvu ezinsundu ezidliwe yisiguli sikashukela?
Kukhona indida: ikhofi ingakhuphula ushukela wegazi esikhathini esifushane, kepha isiza ukuvikela isifo sikashukela sohlobo 2 ngokuhamba kwesikhathi. Izizathu zalo mphumela azifundiswanga ngokuphelele.
2. Imiphumela ezuzisayo yekhofi ngokuhamba kwesikhathi
Ososayensi banezincazelo eziningana ezinokwenzeka zokunciphisa ubungozi bokuthola isifo sikashukela sohlobo 2 ngokuhamba kwesikhathi:
I-Adiponectin: I-Adiponectin iprotheni esiza ukulawula ushukela wegazi. Ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, kubalwa inani eliphansi laleli protein. Ukusetshenziswa okuhleliwe kwekhofi emnyama kukhulisa izinga le-adiponectin emzimbeni womuntu.
I-hormone yezocansi ebopha i-globulin (SHBG): Izinga eliphansi le-SHBG lihlotshaniswa nokumelana ne-insulin. Abanye abacwaningi baphawula ukuthi izinga le-SHBG emzimbeni likhuphuka ngokusetshenziswa kwekhofi, okungavimbela ukukhula kwesifo sikashukela sohlobo 2.
Ezinye izinto eziqukethwe ekhofi: Ikhofi inothile kuma-antioxidants, angathinta izinga likashukela ne-insulin egazini, anciphise imiphumela emibi engenzeka nge-caffeine.
Umlutha: Kungenzeka ukuthi emzimbeni womuntu, ngokusebenzisa isikhathi eside ngokwanele ikhofi, ukumelana ne-caffeine kukhula futhi nokwanda koshukela kwegazi kungenzeki.
Ngamafuphi, ikhofi ingaba nemiphumela emihle yesifo sikashukela neye-sikashukela. Kodwa-ke, kubantu abaningi, imiphumela yokulwa nesifo sikashukela ibonakala idlula leyo pro-diabetes.
Ngale ndlela, ososayensi bathole ukuthi ikhofi ivikela umzimba wethu ekuhlaselweni yisifo senhliziyo, ivimbela ukufakwa kwe-calcium emithanjeni yemithambo yegazi, nayo engeza kakhulu futhi i-ginous plus (Sincoma isihloko esithi "Izinkomishi ezintathu zekhofi ngosuku zivikela ekuhlaselweni yinhliziyo").
Isiphetho: Kunemibono eminingana yemiphumela yesikhathi esifushane neyesikhathi eside ikhofi emzimbeni womuntu. Noma kunjalo, kutholakele ukuthi kubantu abaningi, ukusetshenziswa kwekhofi okuhleliwe kuhlobene nengozi encishisiwe yokuhlakulela isifo sikashukela sohlobo 2.
Isifo sikaParkinson yisifo sobuchopho esibulalayo futhi esingalapheki esithinta abantu abangamaphesenti ayisi-2 kuya kwababili ngaphezulu kweminyaka engama-65, ngokumangazayo, kepha okungenani ucwaningo oluthile luye lwabonisa ukuthi abantu abadla ikhofi njalo bangaba ngama-80% amathuba okuthola isifo sikaParkinson.
Abaphenyi bakhombe uhlobo olusetshenziselwa i-GRIN2A, obekubonakala luvikela abantu abaphuza ikhofi kwisifo sikaParkinson. I-GRIN2A ihlotshaniswa ne-glutamate, ikhemikhali okusolwa ukuthi libulala amaseli obuchopho abashona ezigulini ezinesifo sikaParkinson. I-Glutamate ingahle incike kwenye indawo eyaziwa ngokuthi yi-adenosine, kanti nekhofi iyaphazamisa le nqubo.
Kodwa-ke, ngama-25% kuphela abantu abane-genIN variant gene, ekhulisa umphumela wokuvikelwa kwekhofi. Isiphetho: Ikhofi inganciphisa ubungozi beParkinson, kodwa engxenyeni encane yabantu.
Ekhuluma ngezinkinga ze-neurodegenerative, isifo se-Alzheimer siyindlela evame kakhulu yokuwohloka komqondo. Ngeshwa, alikho ikhambi lalesi sifo, eliholela ekuthini likhule ngokuhamba kwesikhathi, futhi ekugcineni liholele ekufeni.
Lapha, ucwaningo lukhombisa ukuthi abantu abaphuza cishe izinkomishi ezintathu zekhofi ngosuku bakhombisa ukuncishiswa okuphazamisekile kokulimala kwengqondo kuqhathaniswa nalabo abangaphuzi ikhofi.
Lokhu kuvikela akubonakali lapho kuphuza itiye noma ikofi eline-decaffeinated, ngakho-ke inzuzo ivela kuphela ekuhlanganiseni kwe-caffeine nakwezinye izinto ezihlobene nekhambi lekhofi.
Eqinisweni, ucwaningo olusha olwenziwe yi-University of South Florida lwathola ukuthi le nhlanganisela inyusa izinga lokukhula okubalulekile egazini elibizwa ngokuthi yi-G-CSF (i-granulocyte colony stimul factor factor), evimbela ukwakheka kwesifo i-Alzheimer's. Ukunyuka kwe-GCSF kumagundane kuthuthukisa inkumbulo yabo.
Amanothi ambalwa mayelana nekhofi
Sicela wazi ukuthi ukuphuza ikhofi kungaba nemiphumela ehlukile kubantu abahlukahlukene. Uma unesifo sikashukela, noma uma unezinkinga noshukela wegazi ophakeme, kufanele ubheke ngqo ukuthi umzimba wakho uphendula kanjani ukuphuza ikhofi. Uma uqaphela ukuthi lesi siphuzo sikhuphula kakhulu ushukela wegazi, khona-ke ikofi elifakwayo yisinqumo esingcono kakhulu kuwe.
Bheka indlela umzimba wakho osabela ngayo bese wenza ukukhetha okuhle kakhulu.
Sincoma i-athikili "Ikhofi ngokumelene umdlavuza wesibindi."
Isifo sikashukela yisifo esithinta indlela umzimba wakho owucubungula ngayo ushukela egazini. I-glucose, eyaziwa nangokuthi ushukela wegazi, yondla ubuchopho bethu futhi inikeze amandla emisipha nezicubu.
Uma unesifo sikashukela, kusho ukuthi igazi lakho liqukethe ushukela omningi kakhulu. Lokhu kwenzeka lapho umzimba wakho uthola ukumelana ne-insulin futhi ungasakwazi ukudonsa ngempumelelo ushukela kumaseli ukuze uthole amandla. Ukweqile kweglue egazini kungadala izinkinga ezinkulu zempilo. Kunezici ezimbalwa ezingadala isifo sikashukela.
Isifo sikashukela singamahlalakhona, sishukuma futhi kukhona okuhlukahlukene koshukela abasemngceleni, okuthiwa yi-prediabetes. Isifo sikashukela esingamahlalakhona singaba ngezinhlobo ezi-2 - uhlobo 1 nohlobo 2. Isifo sikashukela sokukhulelwa senzeka ngesikhathi sokukhulelwa, kepha sivame ukunyamalala ngemuva kokuzalwa. Isifo sikashukela, kwesinye isikhathi esibizwa ngokuthi yisifo sikashukela se -lineline, sisho ukuthi i-glucose yakho yegazi iphakeme kakhulu kunokujwayelekile, kepha hhayi kangako ukuthi utholakale unesifo sikashukela.
Izimpawu nezimpawu zesifo sikashukela zifaka:
ukwehla kwesisindo okungachazwanga
Uma ucabanga ukuthi unezimpawu ezinjalo, kufanele uthintane nodokotela.
Ikhofi nokuvikelwa kwesifo sikashukela okungenzeka
Abaphenyi beHarvard benza isivivinyo lapho abantu abangaphezu kwe-100,000 bahlanganyela khona iminyaka engama-20. Babheke kakhulu eminyakeni emine kanti abakutholile bashicilelwa kamuva kulolu cwaningo luka-2014.
Kwatholakala ukuthi kubantu abakhulisa ukuphuza kwabo ikhofi ngaphezu kwenkomishi eyodwa ngosuku, ingozi yokuthola isifo sikashukela sohlobo 2 yayiphansi ngamaphesenti ayi-11.
Kodwa-ke, abantu abanciphisa ukusetshenziswa kwabo kwekofi ngenkomishi eyodwa ngosuku bakhulisa ubungozi babo bokuba nesifo sikashukela ngamaphesenti ayi-17. Kwakungekho mehluko kulabo abaphuza itiye.
Akukacaci ukuthi kungani ikhofi linomthelela onjalo ekuthuthukisweni kwesifo sikashukela. Cabanga i-caffeine? Eqinisweni, i-caffeine esikhathini esifushane inyusa amazinga e-glucose kanye ne-insulin.
Kokunye ukuhlola okuncane okubandakanya amadoda, ikofi eline-desaffeine lakhombisa nokwanda okukhulu koshukela wegazi. Izifundo ezinqunyelwe okwamanje ziyaqhubeka, futhi ucwaningo oluningi luyadingeka ngemiphumela ye-caffeine kushukela.
I-Caffeine, ushukela wegazi ne-insulin (ngaphambi nangemva kokudla)
Olunye ucwaningo lwango-2004 lwathola ukuthi ukuthatha i-capsule ye-caffeine ngaphambi kokudla kuholele ekunyukeni kwamazinga kashukela wegazi ngemuva kokudla kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2. Kubonise nokwanda kokumelana ne-insulin.
Ngokusho kocwaningo lwakamuva lwe-2018, izinhlobo zofuzo zingadlala indima ku-caffeine metabolism kanye nomthelela wazo kushukela wegazi. Kulolu cwaningo, abantu abasebenzisa i-caffeine kancane kancane bakhombisa ushukela wegazi ophakeme kunalabo abakha i-caffeine ngokushesha ngofuzo.
Ukudla i-caffeine isikhathi eside kungashintsha umphumela wayo ekuzwelweni kwe-glucose nokuzwela kwe-insulin. Ukubekezelela ukusetshenziswa kwesikhathi eside kungadala umphumela wokuvikela.
Ucwaningo lwamuva nje olwenziwe ngonyaka we-2018 lukhombisa ukuthi imiphumela yesikhathi eside ye-caffeine ingahlanganiswa nengozi encishisiwe yangaphambi kwesifo sikashukela nesifo sikashukela.
Ukuzila ushukela wegazi kanye ne-insulin
Olunye ucwaningo lwango-2004 luhlolisise umphumela “wezinga eliphakathi” kubantu abangenaso isifo sikashukela abaphuza ilitha elilodwa lekofi ejwayelekile ngosuku noma bayeke ukuphuza ngalo.
Ekupheleni kocwaningo lwamasonto amane, labo ababephuza ikhofi abaningi babene-insulin ethe xaxa egazini labo.
Uma unesifo sikashukela sohlobo 2, umzimba wakho awukwazi ukusebenzisa i-insulin ngempumelelo ukulawula ushukela wakho wegazi. Umphumela "wokubekezelelana" obonwa ngokusetshenziswa isikhathi eside kwekhofi uthuthuka isikhathi eside kakhulu kunamasonto amane.
Kunomehluko ocacile sendlela abantu abanesifo sikashukela nabantu abangenaso isifo sikashukela abasabela ngayo kwi-caffeine. Ocwaningweni olwenziwe ngo-2008, abathandi bekhofi abajwayela abanesifo sikashukela sohlobo lwe-2 bahlala bebheka ushukela wegazi labo ngenkathi benza imisebenzi yansuku zonke.
Ngokuhamba kosuku, kwaboniswa ukuthi ngokushesha ngemuva kokuphuza ikhofi, ushukela wegazi labo waphakama. Ngezinsuku lapho bephuza ikhofi, ushukela wegazi labo wawuphakeme kunangezinsuku lapho bengazange.
Ezinye izakhiwo ezizuzisayo zekhofi
Kunezinye izinzuzo zezempilo ngokuphuza ikhofi ezingahambisani nokuvimbela isifo sikashukela.
Izifundo ezintsha ezinobungozi obulawulwayo ziveze ezinye izinzuzo zekhofi. Kubandakanya ukuvikela okungaba khona koku:
Izifo zesibindi, kufaka phakathi umdlavuza wesibindi,
Lezi zifundo ezintsha zikhombisile nokuthi ikhofi inciphisa ubungozi bokudangala futhi ikhulisa amandla okugxila nokucabanga kahle.
Ukuvimbela isifo sikashukela
Ikhofi ingathandwa kakhulu kunangaphambili, kepha ukuyiphuza njalo akuyona indlela engcono yokubhekana nesifo sikashukela - noma ngabe (uyakholelwa noma cha) kunobufakazi obengeziwe bokuthi bungasiza ukuvikela isifo sikashukela.
Iziphuzo ezinokhilimu, ezinoshukela ezitholakala emaketangeni e-cafe zivame ukuba nama-carbohydrate angenampilo. Ziphakeme kakhulu kilojoule.
Imiphumela ushukela namafutha kofi eminingi naseziphuzweni ze-espresso kungahle kudlule izinzuzo zanoma yimiphi imiphumela evikela ikhofi.
Kungashiwo okufanayo ngekhofi enoshukela futhi enamakha nezinye iziphuzo. Ngemuva kokungeza i-sweetener, ingozi yokuthola isifo sikashukela sohlobo 2 iyakhula. Ukuthatha ushukela ongeziwe kakhulu kuhlobene ngqo noshukela nokukhuluphala.
Ukuphuza ikhofi kuphuza kakhulu kumanoni agcwele noma ushukela njalo kungandisa ukumelana ne-insulin. Lokhu ekugcineni kungaba nomthelela kuhlobo 2 sikashukela.
Amaketanga amaningi amakhulu ekhofi anikeza iziphuzo ezinama-carbohydrate amancane namafutha. Iziphuzo zekhofi ze- “Skinny” zikuvumela ukuba uvuke ekuseni noma ntambama ngaphandle koshizi kashukela.
Yini enhle ukuyengeza ekhofi
engeza i-vanilla nesinamoni njengenketho enempilo enokuqukethwe kwe-zero carbohydrate,
Sebenzisa inketho yekofi ye-bulletproof (ikofi ngebhotela elingeziwe),
khetha ubisi lwe-vanilla olungabanjwanga njengokakhukhunathi, ifilakisi noma ubisi lwe-alimondi,
buza ingxenye yesilinganiso sesiraphu enongiwe lapho u-oda ezindlini zekhofi noma usika isiraphu ngokuphelele.
Ngisho kubantu abaphilile, i-caffeine ekofi ingaba nemiphumela emibi. Imiphumela emibi ejwayelekile ye-caffeine ifaka:
Njengakho konke okunye, ukulinganisela kuyisihluthulelo sokudla ikhofi. Kodwa-ke, noma ngabe usebenzisa ikhofi ngokulingana, kunezingozi okufanele uxoxe nodokotela wakho.
Lezi zingozi zibandakanya:
ukukhulisa i-cholesterol ekhofini engakhekile noma i-espresso,
ingozi yokushiswa yinhliziyo,
ukukhuphuka koshukela egazini ngemuva kokudla.
Intsha kufanele idle okungenani ama-milligrams ayi-100 (mg) we-caffeine nsuku zonke. Lokhu kufaka phakathi zonke iziphuzo ezinekhofi, hhayi ikhofi kuphela. Izingane ezincane kufanele zigweme iziphuzo ezinekhofi. Ukufaka i-sweetener eningi kakhulu noma ukhilimu kungandisa ubungozi bakho bokuba nesifo sikashukela nokukhuluphala.
Mangaki izinkomishi zekhofi ongaziphuza ngosuku uma unesifo sikashukela sohlobo 2
Kuya ngomuntu, njengoba kungekho ukuncoma kwendawo yonke. Kodwa-ke, ngokuvamile, ukuphuza ikhofi elingafakwanga ngokulinganisela kulungele abantu abanesifo sikashukela sohlobo 2. Isincomo esijwayelekile ukuthi singadli amakhilogremu angaphezu kuka-400 wekhofi ngosuku. Lokho cishe izinkomishi ezi-4 zekhofi.
Uma lokhu kuthinta imizwa yakho, ukulala, ushukela wegazi namandla, ungancoma ukuthi kunciphise umthamo wakho. Into ebaluleke kakhulu lapho ukhetha ikhofi kubantu abanesifo sikashukela, noma kulabo abalawula isisindo sabo, ukunaka okuqukethwe kwe-carbohydrate obisini futhi kungezwe ama-sweeteners. Kunconywa ukunciphisa noma ukuqeda ama-sweeteners wokufakelwa, ngoba abulala amagciwane asemathunjini, abangele ukuthambekela nokudla ngokweqile, futhi kuthinte nezinga lesisindo noshukela wegazi.
Ama-latte endabuko, i-cappuccinos kanye nomhlophe okucwathile aqukethe ubisi, futhi mhlawumbe nama-sweeteners afakiwe. Iziphuzo zekhofi ezingena-carbohydrate ngaphandle kwe-carbohydrate zifaka i-Americanano, i-espresso, isihlungi sekofi, nazo zonke izinhlobo zokwenza ikhofi emnyama.
Esikhundleni sezinye izithasiselo zekhofi, khetha uju njenge-sweetener bese ufaka ubisi olungafakiwe esikhundleni sikakhilimu. Lokhu kuzonciphisa ukungena kwamafutha nama-carbohydrate amaningi, ngenkathi kugcinwa ukunambitheka. Namathela ku-1 isipuni soju noma ngaphansi, equkethe amagremu ayi-15 ama-carbohydrate. Iziphuzo zekhofi yendabuko zingaba nama-gramu angama-75 ama-carbohydrate ushukela ongeziwe, ngakho-ke lokhu kunciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwawo.
Ikhofi: I-antioxidant kanye nomdlavuza
Ngenkathi kukholelwa ukuthi ushokoledi omnyama netiye eliluhlaza kungama-antioxidants amahle kakhulu okunciphisa isisindo futhi athole ukuqashelwa okuhle kokuqukethwe kwabo, empeleni ikhofi idlula bobabili kule ngxenye.
Eqinisweni, ama-antioxidants aqukethe ikhofi angenza ukuya ku-50-70% wesamba esiphelele sokudla okudliwayo, okungalungile kangako, ngoba kusho ukuthi imifino ayisetshenziswa ngokwanele.
Ezimweni eziningi, ukuphuza izinkomishi zekhofi ezi-4 ngosuku ngosuku kunciphisa ubungozi besifo sikashukela sohlobo II.
Imvamisa, ungaphuza ikhofi ngohlobo 1 nesifo sikashukela 2, kepha kudingeka ukuthi ubheke indlela umzimba osabela ngayo.
Ikofi yemvelo emnyama neluhlaza iyasebenziseka, kepha kuyodingeka wenqabe ikhofi esheshayo.
Ungangeza ubisi, ukhilimu - cha. Ushukela nawo awufiseleki.
Ikhofi yesifo sikashukela ingaba yingozi futhi ibe yinzuzo, konke kuya ngesimo sesiguli esithile. Udinga ukubheka ukusabela kwakho, ngemuva kokubonisana nodokotela wakho.
Ikhofi nakanjani akuyona eyawo wonke umuntu. Futhi lokhu akuyona i-wand yomlingo futhi akuyona isiphuzo samandla sokunciphisa umzimba. Kepha, ikofi linikeza izinzuzo ezinkulu zezempilo kulabo abazisebenzisa ngaphandle kokuthanda ngokweqile. Amaphuzu alandelayo amahle abhaliwe:
Imidlalo engcono kakhulu yokusebenza kwengqondo.
Mhlawumbe ubungozi obuphansi bezinhlobo ezithile zomdlavuza, izifo ze-neurodegenerative, kanye nohlobo 2 sikashukela.
Okunye ukuvimbela ukushona kwangaphambi kwesikhathi nesifo senhliziyo.
Ucwaningo oluningi lwekhofi lungubhubhane. Lokhu kusho ukuthi izifundo zibonisa izinhlangano, hhayi izimbangela nemiphumela. Ngoba nje ukuphuza ikhofi kuhlotshaniswa nobungozi obuthile futhi nosizo lwayo akusho ukuthi yikhofi ebanga zonke lezi zingozi noma izinzuzo.
Ngokuvamile, kukholelwa ukuthi ukuphuza ikhofi kuhle, kepha hhayi wonke umuntu, futhi kunoma yikuphi, udinga ukwazi isilinganiso.
Odinga ukukwazi ngekhofi: Ukubuyekezwa kwe-bioexpert yevidiyo
... mayelana nekhofi esheshayo. Ikhofi ilungiswe ngendlela yendabuko kusuka kubhontshisi okugazingiwe kumenzi wekhofi onenqwaba yezifiso.
Yize ikhofi esheshayo ingaphansi kwekhofi yemvelo ngokunambitheka, ezimeni eziningi iyedlula ngisho nakulempahla yamathani. Lokhu kungenxa yokuthi, ngenxa yobunzima bokukhiqiza, okuqukethwe kwe-caffeine ezinhlobonhlobo eziningi zekhofi esheshayo kuphakame kakhulu kunasemhlabeni wemvelo.
Ngaphezu kwalokho, i-caffeine esheshayo ikhishwa amahora amaningi isikhathi eside kune-caffeine yemvelo.
... mayelana nekhofi eyonakele.
Ngeshwa, izindlela eziningi zesimanjemanje zokuqumba izimboni zibandakanya ukusetshenziswa kwamakhemikhali ahlukahlukene amakhemikhali. Le nqubo ifaka izigaba eziningana: ngemuva kokufaka ubhontshisi wekhofi emanzini afudumele, iyakhishwa, bese kufakwa i-solvent yamakhemikhali enxebeni lekhofi, iwathela ngamanzi abilayo.
Isisindo sekhofi esomile esitholakele ngemuva kwalokhu sincane kakhulu kune-caffeine (ifinyelela ku-0,1%) futhi akukho sendlalelo se-wax, esivame ukumboza ubhontshisi wekofi yemvelo. Kodwa-ke, ekhofi ebilisiwe, ama-alkaloid ngokuvamile aqukethe kuwo ayagcinwa.
Ngendlela, i-caffeine ayisuswa ngokuphelele.
... mayelana nezindawo zekhofi.
Abantu abaphikiswe ekhofi yemvelo bavame ukululekwa ukuba basebenzise indawo yabo, bakhumbuze yona ngokunambitheka nephunga, kepha kungenayo i-caffeine noma iqukethe ngamanani amancane.
Kulokhu, kusetshenziswa izitshalo ezahlukahlukene - i-rye, ibhali, i-chicory, isoyadi, i-artichoke yaseJerusalema, ama-chestnuts ... IChicory isetshenziswa kabanzi. Inezindawo eziningi zokwelapha - i-antimicrobial, anti-inflammatory, diuretic, choleretic, sedative, ithuthukisa isifiso sokudla.
Kusungulwe ukuthi i-chicory inomphumela we-hypoglycemic, ithuthukisa izinqubo ze-metabolic esibindini, futhi inomthelela ekuguquguqukeni kwama-pancreas.
Isiphuzo esingathandwa kakhulu esivela e-artisoke saseJerusalem sinikezwa kwabanesifo sikashukela esikhundleni sekhofi. Enye yezindlela zokupheka zalo ngokulandelayo: Izilimo eziyizigaxa ezigezwe kahle ziyasikwa, zomiswe futhi zithosiwe kumbala onsundu okhanyayo ephepheni lokubhaka.
Isisindo esiphumela ngemuva kokugaya ku-grinder yekhofi sihlungulwa ngesihlungo. Gcina izimbiza ezivaleke kahle ngengilazi.
Ukuze wenze isiphuzo, thatha amathisipuni angama-0.5-1.0 nge-150 ml yamanzi abilayo.
Ekuphetheni - izeluleko ezisebenzayo.
Ukuze uhlukanise okusanhlamvu kwekofi yemvelo ezindaweni zayo ezihlukile, phonsa ubhontshisi ambalwa engilazini enamanzi abandayo angenamibala. Ngemuva kwemizuzu emi-5, hlikihla amanzi ubone ukuthi umbala wawo ushintshile.
Uma ikhofi ilungile, imvelo, amanzi ahlala engenamibala. Uma okusanhlamvu ku-tread, amanzi athola i-brownish, greenish noma enye i-hue.
Ukuba khona kokungcola okuhlukahlukene kwezitshalo ekhofi lomhlabathi kungabonakala ngokuthela ngezipuni zekhofi enjalo engilazini yamanzi abandayo. Ngokungafani nekhofi esele ebusweni, ukungcola kuhlale kuze kube phansi.